MBAKA AGWALA BUHARI KA Ọ GAA ROM GA RỊỌ MGBAGHARA – hoo!haa!!
Otu ụkọchukwu ndi nzukọ Katọlik so na ndi okwu ha na-ada ụda na ntị Chukwu, ma bụrụkwa onye ntụzi aka ụlọ ekpere a kpọrọ ‘Adoration, Ministry Enugu Nigeria, bụ Rev. Fr. Ejike Mbaka adọọla onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nakwa ndi ọrụ omebe iwu aka na ntị maka nnukwu ihe mkpagbu chere ha n’ihu.
Onye ụkọchukwu a okwu ya na-enwu ka ọkụ nọrọ n’ụlọ ekpere ya bụ nke ọ kpọrọ Adoration Ground Enugwu dọọ aka na ntị a n’isi nso a.
Mbaka nyere onye isi ala bụ Buhari ndụmọdụ ka o were ọsọ were ije gbagaba Rom bụ ebe ọ ga-anọrọ riọ Chineke mgbaghara maka ọbara ndi ọrụ Chineke na ndi ọzọ onweghị ihe ha mere a na-akwafu n’oge ọchịchị ya.
Mbaka sịrị na-aga enwe nnukwu ihe nsogbu ma ọ bụrụ na ndi ndu ala anyị, ma ndi ukwu ma ndi nta ha, ahapụ ịrịọ Chineke mgbaghara.
N’okwu ya, nsogbu ga-adịrị, malite na ndi omebe iwu okpuru ọchịchị ime obodo, ruo ndi Igwe, na ndi ọbụla nọ n’ọkwa ọchịchị, ma ndi kpọrọ onwe ha ndi sinetọ, bụ ndi aka ọrụ ha bụ ịghasagasị ihe, tinyekwara ndi nke na-amagharị n’ụlọ omebe iwu nke ndi nnọchị anya.
Mbaka jụrụ sị, “ọbụdị ndi ole ka ha na-anọchi anya ha?”
Ọ zakwara sị na ha na-anọchite anya nnukwu nsogbu nke na-abịa nso.
Next Post: NDI OTU ROTARY KWANYERE UGWUANYỊ UGWU.